I-MOLOCO Cloud: Idatha-Eqhutshwa, Izixazululo Zesikhangiso Seselula se-AI-Powered zezinhlelo zokusebenza zeselula | Martech Zone
I-MOLOCO Cloud iyipulatifomu yokuthenga ezenzakalelayo yokuqoqwa kwezikhangiso kuzo zonke izingxoxo ezihamba phambili zohlelo zomhlaba wonke nakumanethiwekhi esikhangiso angaphakathi nohlelo. Manje isitholakala njengengxenyekazi esuselwa emafini yabo bonke abathengisi bohlelo lokusebenza, iMOLOCO Cloud inikwa amandla ubuchwepheshe bokufunda bemishini obunika amandla abathengisi beselula ukuthi basebenzise idatha yenkampani yokuqala namasinali wokuqukethwe avela kulo lonke uhlelo lwezemvelo ukuze basebenzise imikhankaso yezikhangiso ngokuzenzakalela amamethrikhi wokusebenza.
Izici ze-MOLOCO Cloud Faka
Ukuhwebelana - finyelela ukushintshaniswa kwezikhangiso zeselula kufaka phakathi i-MoPub (inkampani ye-Twitter), i-Fyber, i-Vungle, i-AdColony, i-Chartboost, i-Tapjoy, i-LINE, nokuningi.
I-Bid Optimizer - ithuluzi elisha sha eliguqula ngokuzenzakalela amanani ebhidi endalini yamanani entengo yokuqala ngesikhathi sangempela ukuze abakhangisi bakwazi ukufeza izinhloso zabo ngenkathi beqinisekisa ukuthi abakhokhi ngokweqile.
Amabhidi Ohlelo - ilungisa ngokuzenzakalela ukukhulisa ukuchofoza, ukuguqulwa, ukufakwa, imicimbi engaphakathi nohlelo, ukubuya kusikhangiso, noma ezinye izinhloso ezibekwe umkhangisi.
Umkhawulo wokukhonjwa kwesikhangiso (LAT) - evumela abathengisi ukuthi bakhombe amadivayisi we-iOS ne-Android anike amandla i-LAT, ngaphandle kokuthi ayikho idatha yokulandela umkhangiso edluliswayo. Isici sisebenza ngokukhomba abasebenzisi ngokuya ngamasiginali wokuqukethwe aqhamuka kuseshini yohlelo lokusebenza yamanje, isimo sedivayisi, idatha enezinga lohlelo lokusebenza, neminye imingcele, etholakala ngokubambisana nemithombo yokuhlinzeka esuselwa ku-SDK efana neFyber. I-LAT Tracking inika amandla abathengisi ukuthi bagcine ukusebenza noma ngabe i-Apple isenze isihlonzi sayo esihlukile sabakhangisi (IDFA) khetha ukungena esikhundleni sokukhetha abasebenzisi.
I-MOLOCO Cloud inika amandla abathengisi beselula ukukhomba izethameli ezinamathuba amaningi okushayela izinzuzo zebhizinisi labo kumanethiwekhi ezikhangiso aphambili nohlelo ahamba phambili emhlabeni, nezimakethe:
Khulisa umyalezo wakho kuzinhlelo zokusebenza zeselula eziyizigidi ezi-2.5
Finyelela kumadivayisi angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezine futhi ukhulise i-userbase yekhwalithi
Zuza abasebenzisi, bhala kabusha, yenza kabusha, yenza izincomo, futhi wandise inani lempilo.
Shaya ukubuyiselwa okuyinselele ekusetshenzisweni kwemali yesikhangiso (I-ROAS) okuhlosiwe ngokususa amandla wedatha yakho
Abakhangisi bohlelo lokusebenza bathola ukulawula okuphelele ekusebenzeni kwabo kokukhangisa okuhleliwe ngokusobala okugcwele kudatha yabo yomkhankaso nokusebenza, kufaka phakathi idatha yezinga lokungena elingabiwa ngamanye amapulatifomu ohlangothini lokufuna.
Qalisa ku-MOLOCO Cloud
Tags: ukushintshaniswa kwezikhangisoAdColonyaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaisivivinyo sebhidiisikhangiso esiqhutshwa idatha siyathengaUFyberamanethiwekhi wesikhangiso sangaphakathi nohleloukukhangisa okungaphakathi nohleloukukhomba kwamuvakhawula ukukhomba kokulandela umkhangisoltvukufunda imishiniizixazululo zesikhangiso seselulaizikhangiso zohlelo lokusebenza lweselulaukukhangisa kohlelo lokusebenza lweselulaUMolocomoloco ifuUhlelo lokukhangisabuyela ekuqhatheleni isikhangisoama-roasTapjoy